Sijabule ukuthi ujabulele i-villa yethu yokulala ye-Victorian ene-charm endala nomlingiswa! Letha umndeni kule ndawo enhle enendawo eningi yokuzijabulisa nokuphumula!
Sitholakala enkabeni yeParkesburg futhi sikumizuzu engama-30 ukushayela ukusuka kwezinye zezindawo ezikhangayo zaseLancaster County...Sight and Sound Theatres, Strasburg Railroad kanye nedolobhana lase-Intercourse. Futhi itholakala kalula phakathi kwemizuzu engama-45 ye-Philadelphia yomlando...i-Franklin Institute, i-Liberty Bell kanye ne-Independance Hall. Isiteshi sesitimela saseParkesburg singaphakathi kwebanga lokuhamba futhi nsuku zonke uzozwa ikhwela laso njengoba sishaya edolobheni!
Indlu yeVictorian ephelele enezinsiza ezigcwele. Indlu inekhishi elihlome ngokugcwele uma ukhetha ukupheka ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ilondolo negumbi elincane lempushana lihlala ngaphandle nje kwekhishi. Sinegumbi lomndeni elikhulu phambi kwendlu kanye negumbi lokudlela elivulekile elinetafula lokudlela le-oki elikhulu elihlala abantu abayisithupha. Ngakolunye uhlangothi lwesitezi kukhona umhume onosofa omkhulu, i-smart TV (ayikho ikhebula) kanye nedeski lokubhala. Maduze nje kuvulandi ongaphambili kunendlu encane ebonisiwe ekamelweni elinamarokhethi amabili okuhlala futhi abuke izimoto futhi abantu bedlula!
Esitezi sesibili kunamagumbi okulala amane. Amakamelo amathathu anombhede olingana nendlovukazi. Igumbi lesine lihlangana negumbi elilodwa lokulala futhi linombhede wosuku olingana namawele one-trundle ngaphansi. Kukhona isicabha ongakwazi ukusikhiya phakathi kwamagumbi amabili nokho igumbi lokuphumula livuleleka ephaseji ngaphandle kwesicabha, ikhethini kuphela elidonsela emnyango. Uzothola iphakethe n play ekamelweni lehholo. Indlu yokugezela enosayizi ogcwele eneshawa (akukho bhavu) itholakala phezulu ezitebhisini. Kukhona futhi i-balcony ephuma ephasishi esitezi sesibili. Ibheke egcekeni elingemuva futhi inokushwibeka ukuze ujabulele inkomishi yekhofi yasekuseni!
Ngemuva kwendlu kunendawo yepikiniki enendawo yokucima umlilo kanye netafula lepikiniki namabhentshi okuphumula kwakusihlwa okuthosiwe kwama-marshmallows nokuhlala eduze komlilo ovuthayo! Sihlinzeka ngokubasa nezinkuni. Kukhona ne-gas grill kuvulandi ongemuva.
Sihlinzeka ngendlela eyamukelekile (kwi-buffet egumbini lokudlela) kanye nekhofi, ukhilimu, ushukela kanye nezikhwama zetiye.
Sihlala eduze futhi ngokuvamile siyakwazi ukuphendula ngokushesha uma unemibuzo. Ukungena kuwukungena ngokwakho ngekhiphedi ukuze kube lula kuwe.